Ahoana ny fomba hanombohana orinasa mahomby | Martech Zone
Alahady, Jona 28, 2009 Douglas Karr
Ny taona lasa niasa tamin'ny orinasa niaraka tamin'ny mpiara-miasa sasany. Ny fananganana orinasa no tetik'asa sarotra indrindra, lafo vidy ary mandany fotoana be indrindra hatrizay. Nanana fiaraha-miasa sy nivarotra vokatra teo aloha aho, saingy miresaka momba ny fananganana orinasa mitaky fampiasam-bola, mpiasa, mpanjifa sns ... Tsy fialam-boly - orinasa tena izy.
Ampahany tamin'ny taona lasa ny miasa amina vondron'orinasa izay mitantana ny orinasany manokana na nanomboka ny orinasany manokana. Soa ihany aho fa manana namana maro amin'ireo faribolana ireo. Niresaka am-po am-po tamin'ny ankamaroan'izy ireo aho - izy rehetra dia nanentana ahy hanao ny dingana.
Ahoana no hanombohanao orinasa iray mahomby? Manangona vola? Manangana vokatra? Mahazoa fahazoan-dàlana anao? Makà birao?
Anontanio ny mpandraharaha tsirairay dia hahazo valiny hafa ianao. Ny sasany amin'ireo mpanolotsaina anay dia nanery anay hahazo memoara fananganana vokatra ary hanomboka famoriam-bola amin'ny fomba ofisialy. Tsy firoboroboana lafo vidy hanombohana orinasa ity! Natombokay ny orinasa tompon'andraikitra voafetra sy ny PPM, saingy ny ambany dia latsaka ny tsena ary nitohy ny fitadiavam-bola.
Nanomboka teo dia niasa tsotra fotsiny izahay tetikasa fanampiny hamatsy vola ny orinasa. Raha jerena, tsy azoko antoka raha ny PPM no dingana voalohany tsara. Tonga tany amin'ny tany nihazakazaka tamina antontan-taratasy ara-dalàna izahay ary tsy nisy prototype. Heveriko fa raha afaka mamadika ny fotoana aho dia nanangona ny loharanon-tsika ary nanomboka ny fampandrosoana.
Mora kokoa ny manazava orinasa iray manodidina ny vokatra misy ohatra iray amin'ny vokatra. Ny fahazoana ny fampidirana orinasa tena izy dia hevitra tsara… raha manana tompona mihoatra ny iray ianao. Raha tsy izany dia tsy azoko antoka fa mila izany ianao mandra-pahatongan'ny mpanjifa voalohany. Mikasika ny PPM (fonosana omena ny mpampiasa vola izany) dia aza manahy izany raha tsy efa manana mpampiasa vola ianao.
Drafitra fandraharahana? Ny ankamaroan'ny mpanolo-tsainay dia nilaza taminay fa hipetraka amin'ny drafi-pandraharahana sy hiasa, fa tsy hiaraka hanao famelabelaran-kevitra fohy izay natao ho an'ireo mpampiasa vola. Nahazo mpampiasa vola tia ROI ve ianao? Tsipiho ny tantaran'ny ROI. Mpamatsy vola iza no tia manova an'izao tontolo izao? Miresaka momba ny fomba hanovanao izao tontolo izao. Mampiasà olona betsaka? Miresaka momba ny fitomboan'ny asa hataon'ny orinasanao.
Tsy sosotra amin'ny làlana nalehanay aho, tsy mino fotsiny hoe io no tsara indrindra. Ireo mpandraharaha miaraka amina orinasa mahomby eo ambany fehikibony dia manana fotoana mora hanombohana ilay orinasa manaraka. Ny mpamatsy vola dia saika manaramaso anao ary ny olona farany nampanan-karena anao dia manantena ny fotoana hanombohanao manaraka.
Ny valiny fohy dia hoe ny olona tsirairay fantatro dia samy nanana ny làlany hafa hanombohana ny orinasany. Ny sasany nanamboatra ny vokatra ary tonga ny mpanjifa. Ny sasany mindrana vola amin'ny banky. Ny sasany nindrana tamina namana sy fianakaviana. Ny sasany nahazo vola fanampiana. Ny sasany nankany amin'ny mpampiasa vola…
Heveriko fa ny fomba lehibe indrindra hanombohana orinasa mahomby dia ny manamboatra làlana izay ahatsapanao fa mahafinaritra anao… ary mifikitra aminy. Miezaha tsy avelan'ny olona ivelany (indrindra ny mpampiasa vola) hitaona ny lalana alehanao. Toro lalana izay tokony hahombiazanao raisina.
Na dia tsy misy manaiky an'izany aza ny mpanoro hevitra anay Ahoana no hanao izany dia manaiky izy rehetra fa isika tokony ataovy… ary ataovy izao. Ka… izahay!